Madaxweyneyaasha Kenya iyo Koonfur Afrika oo ka wadahadlay fududaynta dal-ku-galka iyo ganacsiga | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweyneyaasha Kenya iyo Koonfur Afrika oo ka wadahadlay fududaynta dal-ku-galka iyo ganacsiga
Madaxweyneyaasha Kenya iyo Koonfur Afrika oo ka wadahadlay fududaynta dal-ku-galka iyo ganacsiga
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa booqasho rasmi ah oo labo cisho ah ku jooga Koonfur Afrika, halkaas oo arrimo badan ay uga wadahadlayaan madaxweynaha uu martida u yahay ee Cyril Ramaphosa.
Arrinta dal-ku-galka, oo dad badan oo reer Kenya ay ku dhib qabaan, ayaa madaxweyne Ramaphosa sheegay in uu koox u saari doono arrimaha la xiriira dhibaatooynka ay fiisaha ku qabaan dadka ka yimaada Bariga Afrika.
Sannadkii hore, Koonfur Afrika waxay Kenya u dhoofisay alaabo qiimaheedu dhan yahay $480m, halka ay soo dejisay $20m oo keliya.
Labada madaxweyne waxay go’aansadeen inay wax ka qabtaan isku dheelitir la’aanta ganacsiga, wuxuuna Mr Ramaphosa sheegay in caqabadaha ganacsi ee aan loo baahnayn meesha laga saari doono. Wuxuu intaas ku daray in uu doonayo in Koonfur Afrika uu ku arko badeecooyin badan oo Kenya laga soo dhoofiyey.
Madaxweyne Kenyatta ayaa booqan doona warshad lagu farsameeyey tallaalka.
Wuxuu dhaliillay tallaalka ay reer Galbeedku “kaligood isku koobeen” wuxuuna Afrika ugu baaqay in ay ayagu tallaal samaystaan.
Previous articleMaraykanka oo digniin ka soo saaray dagaalka sii xoogaysanaya ee Itoobiya
Next articleMadaxweyne Erdogan oo wacad ku maray in uu ka guulaysan doono “dagaalka dhaqaale ee madaxbanaanida”
3- Bari oo isaguna wuxuu ka kooban yahay 11 degmo boosaaso oo caasimada ah caluula badarbeyla rako ufayn waaciya qandala qardho xaafuun isku shuban AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka...
Isbaheysiga Yeman oo sheegay in ku dhawad 200 oo ka mid...
Afhayeenka Kulmiye “Guddoomiyihii xisbiga Waddani waala kala iibsaday”
-Hogaamiyayaasha 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ansixiyay sharci...
Canada: Wiil 18 jir Soomaali ah oo xil dowladeed isku sharxay